Ingabe ukudla okumbi kakhulu kwezingane | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 01/10/2021 22:57 | Iseluleko omama
Abazali kufanele banikeze indima ebalulekile ekondleni kwezingane zabo. Kuhle ukuthi njengoba zincane, izingane zilandela imikhuba efanele uma kukhulunywa ngokudla. Kumele bazi ngaso sonke isikhathi ukuthi yini enempilo emzimbeni wabo nokuthi yini eyingozi.
Esihlokweni esilandelayo sizokhuluma ngakho lokho kudla okuyingozi ngokuphelele futhi kuyingozi empilweni yomncane.
3 Ukhokho impuphu
4 Amakhekhe ezimboni
5 Ukudla okusetshenzisiwe
Amajusi angukudla okune-carbohydrate enoshukela omningi njenge-glucose ne-fructose. Ukusetshenziswa ngokweqile kwamajusi kungadala ukuthi izingane zihlakulele izinkinga zesifo sikashukela kanye nesisindo esikhathini esiphakathi. Njengenye indlela yamajusi, inketho engcono kakhulu ubisi lwenkomo noma amanzi.
Inqwaba yokusanhlamvu okutholakala esitolo, banomsoco ophansi futhi bacebile ngoshukela ongeziwe. Ngeshwa futhi naphezu kwalokho okubonile, kungumkhiqizo wenkanyezi ekudleni kwasekuseni kwezingane. Endabeni yokunikeza okusanhlamvu kwabancane, inketho enhle ngama-oats. Kungukudla okunikela ngamandla amakhulu futhi okunikeza i-fiber esezingeni eliphezulu emzimbeni.
Okunye ukudla okuthandwa kakhulu futhi okuyingozi kakhulu ezinganeni yi-cocoa powder. Ingane engadli ibhulakufesi nengilazi yobisi necocoa encibilikayo ayivelakancane. Njengemikhiqizo esivele ibonwe ngenhla, i-cocoa encibilikayo ayinikezeli izakhamzimba futhi inenqwaba kashukela. Inketho engcono ukuthatha i-cocoa ngokuphelele futhi ehlanzekile ngo-100%.
Ukudla okumbalwa okuyingozi nokubi emntwaneni njengamakhekhe ezimboni. Le yimikhiqizo enenani elikhulu lamafutha we-trans noshukela olula. Ukusetshenziswa ngokweqile kwamakhekhe okushiwo, kungaholela ezinkingeni ezinkulu zempilo zomncane esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside. Okufanelekile ukukhetha izithelo noma ufulawa ophelele ngoba unempilo kakhulu.
Lokhu kudla kunezithasiselo eziningi futhi kunothe ngamafutha adlulisiwe nosawoti. Yingakho imikhiqizo enjalo kufanele isuswe ekudleni kwengane kwansuku zonke futhi ihlale ikhetha izitsha ezenziwe ekhaya ezenziwe ngezithako zemvelo ezingenazo izithasiselo ezifana nemifino, inhlanzi noma amaqanda.
Ngamafuphi, lokhu okunye kokudla okungafanele kube khona ekudleni kwezingane noma izingane. Into enhle kakhulu kunoma yikuphi ukukhetha isidlo esenziwe ekhaya esenziwe ngokudla okusha okufana nemifino noma imifino. Abazali kufanele ngaso sonke isikhathi bazi ngomnikelo wokudla okunempilo ezinganeni zabo.
Ukudla okufanele futhi okulungile kuncike ekutheni ingane ingakhula yini ngendlela enempilo futhi ngaphandle kwezinkinga zempilo. Ngaphakathi kwezemfundo, imikhuba emihle yokudla kufanele idlale indima ebonakalayo, ivumele ingane ukuthi idle kahle. Ukujwayela ukudla ngendlela efanele njengezingane kubenza bazi eminyakeni edlule ukuthi yini eyingozi empilweni yabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Iseluleko omama » Yikuphi ukudla okubi kakhulu ezinganeni
Izindwangu zethebula ukugqoka itafula lakho lasekwindla